Mabasa akanakisa aStephen King | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Guillen | | Type, Zvinotyisa
Zuva rakadai nhasi, asi regore 1947, akazvarwa Stephen King, mumwe wevatenzi ve chinotyisa mhando. Makore apfuura, mabhuku ake akange ari pane akanyanya kutengeswa zvinyorwa kwenguva yakareba, saka tinogona kutaura nezve mhando yemazhinji emabasa ake.
Mukuremekedza uyu munyori mukuru uye nebasa rake guru rekunyora, tinokusiyai neizvo zvatinofunga kuti ndiwo mabasa akanakisa aStephen King. Sezvo mune chero humwe hunyanzvi, icho chinhu chakanyanya kuzviisa pasi, saka unogona kusabvumirana nesu pane ese mazita, asi zvirinani tinovimba unonakidzwa nekurangarira aya makuru anotyisa mabhuku.
1 "Kutamba kwerufu" (1978) kana inozivikanwa zvakare mushanduro yayo yakadzokororwa sa "Apocalypse" (1990)
2 "Izvo" (1986)
3 "Iyo Green Mile" (1999)
"Kutamba kwerufu" (1978) kana inozivikanwa zvakare mushanduro yayo yakadzokororwa sa "Apocalypse" (1990)
Iyi nyaya inotaura nezve hutachiona hwefuruwenza, hwakagadzirwa senge inogona kuita chombo chebhakitiriya, chinopararira kuburikidza neUnited States uye chinokonzera kufa kwemamiriyoni evanhu. Vakapona vane zviroto zvakajairika, umo muchembere nejaya vanoonekwa. Chembere inovakurudzira kuti vaende kuNebraska kunorwa naRandall Flagg, hunhu hunosemesa hunomiririra masimba ehuipi uye ine nhumbi yenyukireya.
Yakanyanya misoro yeiyo firimu iri mumitambo nhasi, basa iri naStephen King rave riri rezve rakagadziriswa uye richirangarirwa nevose.
Ndiani kana chii chinogumha nekuuraya vana veguta diki reAmerica? Nei kutyisa kuchiuya kuchimhanyisa kuna Derry muchimiro chemunhu akashata wekunyepedzera achiparadza mukumuka kwayo? Izvi ndizvo zvakatsanangurwa nevatsigiri venyaya ino kuti vazive.
Mushure memakore makumi maviri nemanomwe erunyararo uye chinhambwe, vimbiso yehuchembere inoita kuti vadzokere kunzvimbo yavaigara hudiki hwavo nehudiki kunge hope dzinotyisa. Ivo vanodzokera kuDerry kunosangana neyakare yavo uye pakupedzisira vanoviga kutyisidzira kwakavashungurudza panguva yehudiki hwavo. Vanoziva kuti vanogona kufa, asi ivo vanoziva kuti havazozive rugare kudzamara chinhu icho chaparadzwa zvachose.
"Iyo Green Mile" (1999)
Gumiguru 1932, Cold Mountain Penitentiary. Avo vakatongerwa rufu vanomirira nguva yekutungamirwa kuchigaro chemagetsi. Mhosva dzinotyisa dzavakaita dzinovaita chirauro chemutemo chinodyisa kutenderera kwekupenga, kufa uye kutsiva. Uye mune iyoyo prelude kugehena Stephen King anotora X-ray inotyisa mune yayo yakachena fomu.
Aya ndiwo mabhuku matatu andakanyanya kufarira naStephen King pane ake ese andakaverenga kusvika zvino. Unobvumirana neni here? Ndezvipi zvitatu zvaunofarira zvemunyori uyu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabasa akanakisa aStephen King
Asingazivikanwe pamwezve akadaro
Iwo maviri anotsemuka uye enda unoenda
Pindura kune Asingazivikanwe uyezve